Kukhona umbono ukuthi inhlokodolobha isiRashiya zihlaselwe esishintshashintshayo ezinjalo, lapho umuntu abakwazi ukuphila impilo egcwele, ukusebenza, futhi nje ube. izindawo zokuphumula ezinjalo zibizwa ngokuthi esishintshashintshayo ezingasadingeki. Abanye abantu bakholelwa ukuthi akhiwa ngenxa iphutha amapuleti eziningana zomhlaba, nozobamba emzini agcwalise yiwo ogelezela nemifula ububanzi futhi enamandla.
I esiyingozi esishintshashintshayo ezingasadingeki
Ukuhlala eduze izingosi ezinjalo noma ngqo phakathi kwawo, wonke umuntu ozwa umthelela. Ngokuvamile abantu bakhononda isiyezi, ukucobeka, ubuthakathaka kanye nesicanucanu, nokwehla elibukhali ukusebenza. Kuyingozi ukuhlala ezindaweni ezinjalo, futhi ngoba ngenxa lokhu, akunakwenzeka izifo kakhulu ukugula sina, ngezinye izikhathi ngisho esokufa.
izindawo Geopathogenic eMoscow
Ezinye izindawo eMoscow esishintshashintshayo ezingasadingeki ezibhekwa ayingozi kakhulu ukuze uhlale. Esinye isici ngumgogodla ezikhungweni zomsebenzi edolobheni, zilapho kuhlangana ukugeleza komfula. Phakathi kule zoni kwenzeka kakhulu ngendlela 5 emifuleni komhlaba, sivela endaweni eyodwa. Ngokusho ososayensi, emakamu eliphezulu kakhulu emandleni amabi ezitholakale eduze Okhotny Ryad metro station "South West", eduze "Academic" metro station, eduze emahhovisi Duma State, "River Station" esiteshini, kanye Belyaevo futhi endaweni Khoroshevskoye . Ngokuqondene eMoscow Zoological Park, ukuthi le ndawo is a real amandla uphondo, futhi ukuziphatha izilwane kanye izivakashi lapha umuzwa okuxubile yaziwa. Ngezansi kunohlu ayingozi kakhulu okungavamile endaweni eMoscow kanye namabala amnyama ukuthi akuzona yini ngisho nokuzihlupha ezazivela ilukuluku elikhulu.
Elk Island - uphondo endaweni ababengayazi
Isibonelo esihle khona anomalies epaki ngokuthi "Elk isiqhingi." Lapha, efana Bermuda Triangle, abantu zinyamalale, futhi ngemva kokubuyela esimweni ukulahlekelwa amandla okukhumbula Imininingwane. Naphezu indawo enhle landscape, lezi zindawo awukwazi ukuzwa izinyoni ukucula kanye nokushaya abantu njalo ukundlula le ndawo yaba ikhilomitha.
enhle kakhulu kunjalo ukunyamalala lokhu siqiwu hhayi oyedwa kodwa lonke iqembu wabutha abantu 15 futhi ifakwe zonke izindlela zokuxhumana nezwe ngaphandle navigation kakhulu. Ngalolu suku, inkampani bekulokhu kumatasa ukudlula nokufuna Orienteering, futhi isizathu ukunyamalala wonke amalungu ethimba ukufaka, ngeshwa, akazange aphumelele ukubuyisana nomkakhe. Kuyaziwa ukuthi ngaphambi kokwenziwa iqembu ophumayo wathatha imfundo ngokucophelela ezaziwayo.
Ososayensi abaningi babecabanga ukuthi okwamanje mhlawumbe ngisho travel sikhathi, kodwa, noma kunjalo, uqinisekise lesi imibhalo kanye amaqiniso awubonakali kungenzeka. Kuze kube manje, ososayensi abakwazi kuphela elinde amaqiniso amasha.
izenzakalo kakhulu ongaziwa senziwe Malaya Bronnaya emgwaqweni futhi Ponds Umbhishobhi sika. Ngokwemibiko ethile, lena ezimbi kunazo nelesabekayo eMoscow esishintshashintshayo ezingasadingeki. Rumour has it ukuthi kukhona kungabonwa ezihlukahlukene izipoki izinhlangano ebusuku, futhi ikakhulukazi abantu ebucayi ngokuvamile kukhona uvalo nokuquleka. Ukwehluleka ilandelwa ngokoqobo "on the izithende" futhi abashayeli. Ngokwesibonelo, ngokuvumelana umshayeli eyodwa nsimu efanayo imoto yakhe kabili wehla, kusukela billowed injini ezithusayo black intuthu. Kwakungeyona nje ngibheme, akudingeki ifomu, ngakolunye uhlangothi, umusi ukuthatha ukuma ngal womuntu. Nakuba umshayeli futhi azi- a ongakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona okuqina, kodwa kusekuningi asafuna nesibindi ukuze zisebenze sikhungo yesayensi, ngemva kwalokho lo profesa beqala ukutadisha eningiliziwe endaweni indawo.
Ngenxa yalokho we ucwaningo kwatholakala ukuthi ukwesaba kwakungafanele okungenasisekelo, bese le ndawo kalula kube alotshiwe uhlu esishintshashintshayo ezingasadingeki yenhloko-dolobha. Njengoba ilandiswa ngu-bendawo esikhathini esidlule kukhona amathuna, okuyinto ngokuhamba kwesikhathi ziye nje enezikhukhula. Senanele mystics futhi odokotela, ethi kubantu ehamba kule ndawo ngaphandle kwesizathu nhlobo ezimweni yinhliziyo, ngezinye izikhathi kubangele ngisho ukufa okuzumayo. Mhlawumbe neziqubu okungazelelwe yinhliziyo kuzibonakalisa kuphela ngoba abantu baye babona izipoki, ngoba usuku okwakuqabukela ngengqondo.
Kutuzovsky Prospekt - endaweni sokufa ezinkulungwane zabantu
esishintshashintshayo Geopathogenic futhi okungavamile eMoscow ethulwa kwenye indawo engavamile. Kutuzovsky yokungcwaba, ngokusho kongoti, enye indawo sasivumela eqinile pathogenic. Ngokwezibalo, lapho kwenzeka abaningi kakhulu ezingozini zomgwaqo. Le ndawo, ngaphandle kokungabaza, kungenziwa uyingozi. Njalo ngonyaka endleleni zehlukaniswe lenqwaba imoto enhle kakhulu, abashayeli ngeke ahlale beshayela ngenkathi didekile nezinye isizathu esikhulu zonke izingozi ezenzeka abakwazi ukukuthola. Kuyaphawuleka ukuthi uhlobo izingozi ezenzekayo lapha - ikakhulukazi ikhanda on ukushayisana. Ngokwezazi-mlando eziningi, le izoni ezingasadingeki kwamiswa ngenxa kubhidlizwe emathuneni lasendulo kanye nezakhiwo kusayithi umgwaqo ovulekile umatasa. Kucatshangwa ukuthi abashayeli ukubona abantu okusolwa abahlala phakathi komgwaqo nokuzama Dodge ushayisile, awela kwindlela ezayo, lapho eziphilayo alukhethiwe. Yiqiniso, lolu lwazi Kunzima kakhulu ukukholelwa, kodwa iqiniso ukuthi, ngeshwa, kuyiqiniso.
Okungavamile zone eMoscow nesifunda eMoscow bebelokhu isihloko ucwaningo enemininingwane.
Lytkarino emzaneni. Ngakho uma unganakile siphile elite zendawo?
Enye "indawo diabolism" - I-Moscow elite Lytkarino emaphandleni, lapho, naphezu ezolile kwangaphandle, ukuzibulala cishe masonto onke kwenzeka. Iqiniso lokuthi lapha abathintekayo heck, ukuqonda kakade kuphela ngesimo wakudala ezikhulayo lapho nezihlahla nemithi. Akhula ukuze kwakhiwa umgqomo is cruciform ufa omunye esesabekayo yayo hlobo. Iziqu kayikhuli evamile, futhi kuhambisana phansi.
Lytkarino abomdabu bathi isizathu ukwakheka zone ezingasadingeki kuleliphuzu ukuphazamiseka kwesimo sengqondo efile futhi boorish kuya headstones futhi gravestones. It is eyaziwa ukuthi ngesikhathi Soviet inkathi tombstones kanye izikhumbuzo okuqondene abantu ababefile esetshenziswa iziphathimandla ukwakha entsha yezindlu multi-umndeni. Nezimfihlakalo futhi iqiniso ukuthi abantu abafileyo ekhokhela eziphambekweni ezinkulu zokuphila, akunakwenzeka ukuthola, kodwa iqiniso kabi umqondo engcwele iba scary ngempela nokunyanyisayo.
Akukona zonke izindawo okungavamile eMoscow nesifunda eMoscow, akha wonke legend.
Sertyakino - real isikhathi portal
Sertyakino emzaneni eyaziwa lokuthi insimu yalo, alokhu kwenzeka ngokuphazima kweso teleport ngokusebenzisa isikhathi nendawo. Move abantu abaseduze kakhulu, amakhilomitha 2-3 nje kude indawo. Kwakukhona Ezimweni ezinjalo kaningi, futhi enye indoda teleported kabili kakade. Ngisho ehlathini eduze Sertyakino akakwazi ngokuthi abavamile, ngoba izihlahla ezikhula endaweni, njalo amagatsha basonta in a Kuvunguza. Labo abafisa bakitaza nezinzwa ukufinyelela Sertyakinskoy zone ezingasadingeki silula, wena nje axoshe e Simferopol emgwaqweni omkhulu wamyisa Alexandrovka khona ukwenza baphendukela ilungelo Klimovsk, kodwa engakafiki ngomzana, phenya iphuzu Western Sertyakino, qhubeka cishe angu-3 kanye ukugoqa ku sehlozi. Uma unquma ukuya ngesitimela kagesi, kuyodingeka kusukela eKursk sesitimela ukufinyelela esiteshini "Hryvnia," bese luze 3 amakhilomitha ubheke ngaseNtshonalanga futhi 1 ikhilomitha bebheke ehlathini.
Katuar - isikhala njengabafokazi lokubikezela
Katuar zone libhekene yokuthi, ngokusho izakhamuzi zendawo endaweni kungenziwa njalo waphawula iminonjana kokwehla kwesizathu abangaziwa ezindizayo izinto. Njengoba sazi kusukela izindaba Ezivamile wendawo, esondelene kakhulu esiteshini sesitimela ebonakalayo ngokubona okubonakala ngeso lenyama iminonjana khona UFO. Frisbees zihunyushwa njengoba amabhola akhazimula, futhi ezinye izakhamizi ngisho wayebona ngokwabo ukuzogogobala ingubo esiliva. Notoriety futhi ihlathi ukuthi indawo lapho izakhamizi ukuhlangabezana ngezikhathi uSathane. Ezinye zone ezingasadingeki eMoscow nesifunda eMoscow ukuthola kweso. Futhi kuze kube manje ngemoto kulula kakhulu ukuthola, ngokwanele ukuba unikezele ne eMoscow Ring Road bese ushayela amakhilomitha angaba 29 phezu Dmitrov onguthelawayeka.
Akuwona wonke umuntu ongaphilile nesifunda eMoscow, isithombe kanye nencazelo okuyinto okwethulwa kulesi sihloko abe negama ezimbi. itshe Shutov, njengoba kuqhathaniswa zonke izingxenye engenhla, has a aura kakhulu omuhle futhi ngisho lokukwazi ukwelapha izifo eziningi waphulukisa abantu ezibuthaka. Amanzi, okuyinto bangena namachibi zendawo itshe fafaza edingekayo ukugeza umuntu ogulayo nge izilokotho ezinhle, kulandele ukululama okusheshayo. Itshe namanje ethandwa kakhulu yizivakashi ezibuka amazwe, kungenxa yalesi sizathu ukuthi leli hlathi ifakwe endleleni yeqiniso okuholela kule ndawo ngokuyisimangaliso. Naphezu marshland, lapho likhula Sutovsky ihlathi, leli tshe akuyona kuphela hhayi ocwilayo, kodwa ngisho ngezikhathi eshintsha indawo. Kungakhathaliseki lokhu kuyiqiniso noma cha, hlola, maye, abakwazi. Ungathola lapha ngendlela elandelayo: une ukushayela imoto emgwaqeni omkhulu Rogachev, engakafiki Klusova, jikela ngakwesokudla bese ushayela ohlangothini nje umgwaqo hhayi zavernet kwesokunxele. Khona-ke kufanele ushiye upake imoto yakho futhi uhambahambe uye 150 amamitha eya endaweni.
Izoni ezingasadingeki isendaweni ikhilomitha lika-47 we Yaroslavl onguthelawayeka
Le ndawo kuphawuleka ekuqongeleleni enkulu abangaziwa ezindizayo izinto ngesimo onxantathu.
Ezikhathini zaseSoviet kwakukhona icala ukwazi lapho othanda ukulwa athunywa ngale ndaba, futhi akazange ukufinyelela umgomo, kanti humanoids phezu Shuttle Fairy unyamalale i isiqondiso engaziwa. Le ndawo iye yazuza ukunakwa okukhulu ohlelweni lwesikhathi iminyaka 80-90, kodwa uhlala kuyindaba yokukhathalelwa ingxabano-UFO abacwaningi kuze kube yilolu suku. Isimanga siwukuthi kodwa okwamanje kwi Insimu anomaly zingatholakala omkhulu etendeni emakamu.
ufologists asezingeni zenjabulo enkulu abazoba ukutshela mayelana UFOs, mayelana engela lapho ukubheka kubo, njalo njalo. Ungathola kukhona kalula kakhulu, sifinyelela phezulu 47 amakhilomitha we Yaroslavl onguthelawayeka. Ngu itekisi kukuthatha Sergiev Posad.
Protasovskaya ezingasadingeki zone 3 itholakala phakathi emizaneni, okungukuthi Protasovo, futhi Ogudnevo Dushonovo. Kuyaphawuleka okwamanje ukuthi ezikude 1990 April 30 lapho wathatha yinqaba Ufo quadrangular. Ngemva umkhumbi alien ehamba emhlabeni, kuwo komkhondo umumo elingunxantathu, okuyinto, ngokusho abakhileyo ndawo, zisabonakala. Lokhu akulona icala kuphela ayehlasela njengabafokazi phansi ngaphandle komuzi, ngoba ufologists namanje emsebenzini khona ebusuku futhi ngesikhathi sasemini. Ukuze uthole ngqo indawo kulula kakhulu, umuntu nje ukuya ku Shchelkovo onguthelawayeka bese, ngemuva ngidlula edolobheni elisha, ukuze iphokophele Fryantsevskogo onguthelawayeka. Ngu drive electric lula kakhulu, kusukela udinga kuphela ukushayela kusuka Yaroslavsky ujantshi Fryazin futhi ibhesi Fryanovo ukushayela kancane, ungaya e Protasov.
Shushmor - i indawo ekahle emikhosini
Leli pheshana Shushmor idume yokuthi Akukude, ku Shatura wesifunda Vladimir esifundeni, kuyinto indawo yasendulo imikhuba yobuqaba nemihlatshelo. It izuzwe kulendlu emangalisayo egwadle futhi has simise eyindilinga. ukuhlela ububanzi imayelana 6 metres, futhi bayamhaqa ezibaziweyo amakholomu esibonisa ezibalulekile abantu iziza. Kungenzeka ukuthi lezi amakholomu efanayo ezikhathini zasendulo abadlale indima womhlatshelo. Esikhathini yizinto zesikhathi esidlule mayelana indawo uPetru akhuluma Semenov-Tyan Shani.
I esibi kunazo eMoscow esishintshashintshayo ezingasadingeki kufanele uvakashele ngokuqapha. Okokuqala, lapha kufanele ungahambi wedwa. Okwesibili, kubalulekile ukwazisa bonke imindeni, lapho funa uma isidingo. Okwesithathu, wena qiniseka abe ligcwaliswe ngokuphelele ifoni, i-flashlight, ukufana kanye nekhampasi.
Tseyskoe Gorge North Ossetia